Detoronomy 27 - Ny Baiboly
Detoronomy toko 27
Didy mampanavao ny fanekena rahefa tonga any Kanaana - Fitsofan-drano sy fanozònana.
1Ary Moizy sy ny loholon'Israely dia nanome izao didy izao tamin'ny vahoaka: Tandremo ny didy rehetra andidiako anareo anio.
2Rahefa tafita an'i Jordany hianareo, any amin'ny tany omen'ny Tompo Andriamanitrao anao dia manangana vato lehibe ka hosory sokay, 3ary soraty eo aminy ny teny rehetra amin'ity lalàna ity, rahefa tafita hianao, mba hidiranao eo amin'ny tany omen'ny Tompo Andriamanitrao anao, izay tany tondra-dronono sy tantely, araka ny voalazan'ny Tompo Andriamanitry ny razanao taminao. 4Any an-tendrombohitra Hebala no hatsanganareo ireo vato nandidiako anareo androany ireo rahefa tafita an'i Jordany hianareo, dia hosoranao sokay izy. 5Ary handrafitra otely eo hianao ho an'ny Tompo, dia otely vato tsy voapai-by. 6Vato tsy voavoatra no handrafetanao ny otelin'ny Tompo Andriamanitrao. Ary manatera sorona dorana eo amboniny ho an'ny Tompo Andriamanitrao. 7Manatera sorom-pihavanana, ka mihinàna eo sy mifalia eo anatrehan'ny Tompo Andriamanitrao. 8Ary soraty amin'ireo vato ireo ny teny rehetra amin'ity lalàna ity ka ataovy velona tsara ny soratra.
9Dia niteny tamin'Israely rehetra Moizy sy ireo mpisorona levitika ka nanao hoe: Mangìna ka mihainoa, ry Israely: Androany no efa tonga vahoakan'ny Tompo Andriamanitrao hianao. 10Koa henoy ny feon'ny Tompo Andriamanitrao, araho ny didy aman-dalàny izay andidiako anao anio.
11Nomen'i Moizy didy ny vahoaka androtrizay nataony hoe:
12Rahefa tafita an'i Jordany hianareo, dia ireto no hitoetra hitso-drano ny vahoaka ao an-tendrombohitra Garizima: Simeona, Levì, Jodà, Isakara, Josefa ary Benjamina; 13ary ireto no hitoetra hanozona ao an-tendrombohitra Hebala: Robena, Gada, Asera, Zabolona, Dana, ary Neftalì. 14Dia hiteny ny Levita, ka amin'ny feo avo no hilazany amin'ny olona rehetra ao amin'Israely hoe:
15Aoka ho voaozona ny olona manao sarin-javatra voasokitra na sarin-javatra anidina, izay fahavetavetana eo imason'ny Tompo, asan-tànan'ny mpanao taozavatra, ka mametraka azy ao amin'ny fitoerana mangingina. Dia hamaly ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
16Aoka ho voaozona izay manao tsinontsinona ny ray aman-dreniny. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
17Aoka ho voaozona izay mamindra ny orim-baton'ny namany. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
18Aoka ho voaozona izay mamery làlana ny jamba. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
19Aoka ho voaozona izay manao ny tsy an-drariny amin'ny vahiny sy ny kamboty ary ny mpitondratena. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
20Aoka ho voaozona izay mandry amin'ny vadin-drainy fa manainga ny firakofan-drainy izy. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
21Aoka ho voaozona izay mandry amin'ny biby, na biby inona na biby inona. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
22Aoka ho voaozona izay mandry amin'ny anabaviny, na zanakavavin-drainy izany, na zanakavavin-dreniny. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
23Aoka ho voaozona izay mandry amin'ny rafozam-baviny. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
24Aoka ho voaozona izay mamono an-tàkona ny namany. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
25Aoka ho voaozona izay mandray kolikoly mba hamono aina, dia ny rà tsy manan-tsiny. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena.
26Aoka ho voaozona izay tsy mitana ny tenin'ity lalàna ity mba hanarahany azy. Ary ny vahoaka rehetra hanao hoe: Amena. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.1867 seconds